gargaar - ALinks
Hoyga cuntada ee Bihar, halkaas oo laga helo qaybinta cuntada degmo kasta
November 14, 2020 Maitri Jha gargaar, Hindiya
Cunto qeybinta Delhi: halkee laga helaa cunno bilaash ah Delhi?
November 13, 2020 Maitri Jha gargaar, Hindiya
Maqaalkan, waxaan ku tusi doonaa liiska xarumaha gargaarka ee Delhi iyo siyaabo kale oo suurtagal ah oo lagu helo cunto bilaash ah markaad gaajaysan tahay. Qaranka iyo dawlada hoose, oo kaashanaya hay'adaha diinta, ururada madaxa banaan iyo shaqsiyaadka, waa
Xagee laga heli karaa Hoyga Xarumaha habeenkii ee kuugu dhow? Hubi Halkan!
June 3, 2020 Karuna Chandna gargaar, Hindiya
Hoyga habeenkii ee aniga agtayda Si aad u hesho hoyga u dhow goobtaada, waa inaad ka furtaa khariidadaha google taleefankaaga. Waxaad sidoo kale ku sameyn kartaa raadinta taleefankaaga. Waa inaad gashaa "hoyga habeenkii ee aniga agtayda". Samee
Hoyga cuntada ee ii dhaw? Sida loo helo Xarumaha Xarumaha cuntada u dhow halka aad joogto?
Waxaa laga yaabaa 27, 2020 Antika Kumari gargaar, Hindiya
Si aad u Raadiso gabaadyo cunto oo aniga ii dhow, waa inaad si fudud ugu qortaa 'hoyga cuntada ama 'Hoyga habeenkii khariidada Google. Khariidadan, Waxa kale oo aad ku arki kartaa xarunta 'la xaqiijiyay'
Hoyga cuntada ee Amriki
Waxaa laga yaabaa 24, 2020 Antika Kumari gargaar, Hindiya
Cuntada iyo hoyga, ku qor Khariidadaha Google, "hoyga cuntada ii dhow" ama "hoyga habeenkii ee agtayda ah" ama "hoyga cuntada ee Odisha" ama "hoyga cuntada ee Galbeedka Bengal". Waxaad sidoo kale aadi kartaa Khariidadeyda Hindiya oo dooro " Xarumaha Gargaarka Gaajada
Halkeen ka heli karaa cunto? Cunno qeybinta Hindiya
Waxaa laga yaabaa 18, 2020 Maitri Jha gargaar, Hindiya
Laga soo bilaabo Maarso 2020, dhowr raashin qeybinta ayaa ka socota Hindiya oo dhan ciddii u baahan. Waxaan halkaan ku soo bandhigi doonaa halka hoose ee macluumaadka inta aan heli karno maalmahan. Si aad u hesho hoyga aad ku joogto agagaarka goobtaada, adigu kaliya
Xeryaha Qaybinta Cuntada ee Jaipur
April 14, 2020 Maitri Jha gargaar, Hindiya
Waxaad ku heli doontaa macluumaad ku saabsan maqaalkan ku saabsan dhowr kaamam oo ka socda xeryaha qaybinta ee Jaipur. Wadarta guud ee kiisaska wanaagsan ee Hindiya waa 10,363. Sidoo kale, tirada dhimashada fayraskani waa 339. Shalay uun tiradaasi waxay ahayd qiyaastii
Xeryaha Qaybinta Cuntada ee Punjab
April 8, 2020 Maitri Jha gargaar, Hindiya
Maqaalka, waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan xerooyinka qaybinta cuntada ee Punjab. Tirada dadka uu ku dhaco coronavirus ayaa si aad ah u kordheysa. Maanta (08, Abriil 2020) lafteeda, waa tirada 485 ee dacwadda togan
Xeryaha Kaalmaynta Gaajada ee Uttar Pradesh
April 7, 2020 Maitri Jha gargaar, Hindiya
Waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan xeryaha socda ee gargaarka-gaajada ee Uttar Pradesh maqaalkan. Laga soo bilaabo 7th Abriil 2020, wadarta tirada kiisaska firfircoon ee Hindiya waa 4,911. Tirada guud ee dhimashada ayaa korortay waxayna noqotay 137. Waxaa jira
Ilaalinta caruurta yar yar iyo caruurta Australia
January 17, 2020 Antika Kumari gargaar, Australia
Badbaadada ilmaha ee Australiya mas'uuliyiinta ilaalinta ilmaha ayaa soo dhexgalin kara goobaha qoyska sababta oo ah qatar weyn oo ilmaha wax yeeleysa. Australia gudaheeda, dowladaha gobolka iyo territoriga ayaa mas'uul ka ah howlaha adeegyada ilaalinta carruurta. Sharciga ilaalinta caruurta gudaha